August 2016 – Ministry of Education in Puntland
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo la kulmay Hay’adda UNICEF Qayb teedda shaqalaha Waxbarashadda.
29/08/2016- Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Taclinta sare Maxamed Abdulqadir Cismaan ayaa xafiiskiisa ku Qaabilay manta hay’adda UNICEF Qaybta shaqalaheeda Waxbarshada. Agaasimaha guud ayaa kulankaan waxay uga Wada hadleen […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare iyo Hay’adda AET oo Tababar macalimiinta Waxbarashada Dadban u soo xiray
22/08/2016- Wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland ayaa u soo xirtay Tababr 12 macalimiin oo ka howl gala xarumaha waxbarashada Dadban ama Waxabarashada Dadka Waawayn oo hoos yimaada Wasaaradda waxbarashada iyo […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo Tababar Manhajka ah uga furtay Macalimiinta Gobolada.
15/08/2016- Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa u furtay Tababar labo Maalmood ah macalimiin ka kala yimi Goboladda Sool iyo Nugaal oo lagu Tababarayey manhajka waxbarashada Dugsiyada Hoose Dhexe Waxaa wasaaradda ka […]
August 13, 2016 / News
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare iyo Wasaaradda Maaliyada oo shir ku saabsan World Bank uga furmay Wasaaradda Waxbarashada.
13/08/2016- Xarunta Wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare ee Dowlada Puntland Magaalada Garoowe Ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayey sidii bahada waxbarashada gaar ahaan macalimiinta Dugsiyada Puntland lacagta mushaarka World […]
Agaasimaha Guud Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo u soo xiray Tababar 50 Macalin oo Waxbarashada Dadban.
Wasaaradda Waxbarsahada iyo Tacliinta sare oo Ganaaxday imtixaankii Fasalka 8aad ee Tuuladda Qarxis.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo shaacisay Natiijada Imtixaanka fasalka 8aad
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo shir dib u eegis ku Samaynasa Waxqbadkii lixdii bilood EU-DA.